January 28, 2021 - Khitalin Media
January 28, 2021 by Khitalin Media
ရည်းစား မဖြစ်ခင် သူကဘယ်လိုလူဖြစ်မလဲဆိုတာ ဒီအချက်( ၇ )ချက်မှ လေ့လာခန့်မှန်းနည်း
တရားဝင် ချစ်သူတွေမဖြစ်ခင် စောင့်ကြည့်ကာလတွေမှာ သူကဘယ်လိုလူဖြစ်မလဲဆိုတာကို ဒီအချက်လေးတွေမှတစ်ဆင့် လေ့လာ ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ (၁)မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိ/မရှိ သူ့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံကို သတိထားကြည့်ကြည့်ပါ။ ထိုင်တဲ့အခါမှာ မတ်မတ်လေးဖြစ်နေလား၊ ငိုက်စိုက်ပြီးထိုင်းမှိုင်းနေသလား? စကားပြောတဲ့အခါ သူ့မျက်လုံးတွေက သင်နဲ့မျက်လုံးချင်းမဆိုင်ရဲပဲ အဝေးတစ်နေရာကိုပဲငေးကြည့်နေတတ်တယ်ဆိုရင် သူဟာယုံကြည်မှုနည်းပါးတဲ့သူ။ (၂)လူပျင်းတစ်ယောက်ဟုတ်/မဟုတ် သင်နဲ့လာတွေ့တဲ့အချိန်တွေမှာ ဖြစ်သလိုပုံစံနဲ့ မှန်မကြည့်ပဲလာသလိုဖြစ်နေသလား? ဆံပင်ရှုတ်ပွနေတာကို လက်နဲ့ပွတ်သပ်ပြီး ခေါင်းမဖြီးထားဘူးလား? အချိန်မရှိတော့လို့ ရေမချိုးထားပဲ သင့်ဆီအပြေးလာတဲ့ပုံစံဖြစ်နေသလား? ဒါဆို သူဟာလူပျင်းတစ်ယောက်ပါ။ (၃)ပါးနပ်မှုရှိ/မရှိ(မိန်းကလေးများအတွက်သာ) ကားပေါ်တက်တော့မယ်ဆိုရင် တံခါးဖွင့်ပေးပြီး သင့်ကိုဦးစားပေးသလား? ဆိုင်မှာထိုင်တဲ့အခါ သင့်အတွက်တစ်ရှူးယူပေးသလား၊ ရေတစ်ခွက်ထည့်ပေးဖူးသလား? အစရှိတဲ့အသေးအမွှားအရာလေးတွေကအစ သင့်ကိုဂရုစိုက်ပေးနေရင်တော့ သူဟာပါးနပ်တဲ့လူပါပဲ။ (၄)အရက်သမားဟုတ်/မဟုတ်(မိန်းကလေးများအတွက်သာ) သူ့မျက်လုံးကိုသေချာကြည့်ကြည့်ပါ။ မျက်လုံးအိတ်အောက်ဘက်က အရေပြားတွေတွဲကျနေသလား? တစ်ခါတရံ စကားပြောတဲ့အခါ၊ အသက်ရှူတဲ့အခါ အရက်အနံ့အသက်အနည်းငယ်ရနေသလား? ညညဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နိုက်ကလပ်၊ ပါတီပွဲတွေသွားရတာ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူမျိုးလား? ဒါဆိုရင်တော့ သူဟာ … Read more
စနေသားသမီးများအတွက် ဘဝတစ်သက်စာဟောစာတမ်းနှင့် ယတြာများ
မိမိတို့ရဲ့ အသက်အပိုင်းခြားကို ကြည့်ပြီး အဟောကို ဖတ်ပါလေ။ ညံ့တဲ့နှစ်တွေမှာ ချေရမယ့် ယတြာကိုပါ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ နှစ်တွေမှာလည်း ကောင်းသထက် ကောင်းစေဖို့ ချေရမယ့် ယတြာတွေကိုလည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ စနေသားသမီးဖြစ်သောသင်သည် အသက် ၁၊၉၊၁၇၊၂၅၊၃၃၊၄၁၊၄၉၊၅၇၊၆၅၊၇၃၊၈၁၊ ၈၉၊၉၇၊၁၀၅ နှစ်အတွင်း၌ စနေ သက်ရောက်ဖြစ်၏ သင်သည်ယခုနှစ်အတွင် အလုပ်နေရာ အိမ်နေရာအသစ်ရခြင်၊နေရာထိုင်ခြင်း၊မွမ်းမံရခြင်း၊ပြောင်းရွှေရခြင်းများကြူံရတတ်၏။ခရီးတို၊ခရီးရှည်များ သွားနေရလိမ့်မည်။ ထိုခရီးများသည်လဲ သင့်အတွက်အကျိုးထူးစေပါလိမ့်မည်။မထင်မှတ်ဘဲ ပညာတစ်ခုသင်ကြားရခြင်း၊သင်တန်းတစ်ခုတက်ရခြင်းများပြုရတတ်၏။မရည်ရွယ်ဘဲ မြေဝင်တတ်၏။အလုပ်အကိုင်၌ ထိခိုက်တတ်၏။ပြသနာကြီးစွာဖြေရှင်းရတတ်၏။ ရုံးပြင်ကန္နား၊အမှုအခင်းများနှင့်ပတ်သက်ရတတ်၏။မိမိနှင့်တကွ မိသားစုပါ ကျန်းမာရေးညံ့တက်၏။ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းရောက်ရတတ်၏။မီး၊လျှပ်စစ် ဒုက္ခပေးတတ်၏။အထူးသတိပြုပါ။ လူမျိုးခြား ဒုက္ခပေးတတ်၏။ ရွေနှင့်ရတနာပစ္စည်းများ ထွက်ခြင်း၊ပေါင်နှံရခြင်းများ ကြုံရတတ်၏။ သားသမီးလက်အောက်ငယ်သားနှင့် ပက်သတ်ပြီး စိတ်ညစ်စရာ ကြုံရမည်။စက်ပစ္စည်း ဒုက္ခပေးတတ်၏။ငွေဒလဟော ထွက်ခြင်း၊ငွေအတွက်ပြောဆိုဖြေရှင်းရခြင်းများ ကြုံရမည်။ မထင်မှတ်သော ဆွေမျိုးသားချင်းကအကူအညီကောင်းပေးလာလိမ့်မည်။သစ်၊သံ၊သွပ်ကိစ္စများ၊ရေတွက်ကုန်ပစ္စည်းကိစ္စများ အောင်မြင်အကျိုးပေးလိမ့်မည်။ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ၊ဆွေမျိုးအကြီးအကဲတို့က အကူအညီကောင်းပေးလိမ့်မည်။ ကျန်းမာရေးညံ့သော သက်ကြီးရွယ်အိုများ … Read more
ကိုယ့်ကိုတကယ်ချစ်မချစ် မြန်မာ့ရိုးရာ လက်ဆန်းတွက်နည်း ( မိန်းကလေးတွေ အတွက် သီးသန့်ပါ )
ကိုယ့်ကိုတကယ်ချစ်မချစ်တွက်နည်း (မြန်မာ့ရိုးရာ လက်ဆန်းနည်းပါ။) မိန်းကလေးတွေ အတွက် သီးသန့်ပါ။ အရွယ်ရောက်ပြီး သား မိန်းကလေးတွေချစ်စကား ကမ်းလှမ်းခံရတာ ၊ လက်ထပ်ခွင့် ပန်တာတွေ ရှိလာတတ် ပါတယ် ။ ရင်ခုန်ရတာ တစ်ဖက် ကြည်နူးရတာ တစ်မျိုးနဲ့ နောက်ဆုံး တကယ်ချစ်တာမှဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေက ဖြစ်လာ ရစမြဲပေါ့ ။ ဒီပညာလေးက လွယ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ လျှော့မတွက်ပါနဲ့ ။ တကယ်မှန်တာ ။ ကဲ တကယ်ချစ် မချစ်တွက်စစ် ကြည့်မယ်နော်…. အဆင့် (၁) ကိုယ့်ကို ချစ်စကား လာပြောတဲ့ သူရဲ့နာမည် အပြည့်အစုံကို ဗေဒင်သင်္ချာ ဂဏန်းတွေ အဖြစ် ပြောင်းပါ ။ ဗျည်းကိုသာယူပါ ။ အမည်ဗျည်း ဗေဒင် သင်္ချာဂဏန်း အ ၊ … Read more
ချစ်သူကို ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ ဘဝတစ်ခုလုံး ပုံအပ်သူမိန်းကလေးများ ဘာဖြစ်တတ်သလဲ(မိန်းကလေးများ ဖတ်သင့်သည်)
မိမိ ခဈြသူကို ဆိတျကှယျရာအရပျ၌ ဘဝတဈခုလုံး ပုံအပျသူ မိနျးကလေးမြားအတှကျ ဖတျထားဖို့လိုပါတယျ ခဈြသူကို ဆိတျကှယျရာအရပျ၌ ဘဝတဈခုလုံး ပုံအပျသူမိနျးကလေးမြား ဘာဖွဈတတျသလဲ(မိနျးကလေးမြားအတှကျ ဖတျထားဖို့လိုပါသညျ) ခဈြသူကို ဆိတျကှယျရာအရပျ၌ ဘဝတဈခုလုံး ပုံအပျလိုကျသူ မိနျးကလေးအခြို့တိုးတကျလာသညျ့ နညျးပညာခတျေတှငျ ဂုဏျ သိက်ခာအရ အသုံးခခြံခဲ့ရသော ဖွဈစဉျမြား ခပျစိပျစိပျဖွဈလာပါ သညျ။မိနျးကလေးငယျအခြို့ ခဈြသူအမြိုးသားအပျေါ ယုံကွညျ မှုလှနျကဲမိခွငျးနှငျ့ နညျးပညာကိုတလှဲအသုံးခသြော အမြိုးသား အခြို့၏ လုပျရပျကွောငျ့ သကျ ဆိုငျသူနှဈဦးသာ သိထားသညျ့ လြှို့ဝှကျအပျသော နထေိုငျမှုပုံစံ မြားသညျ ….. Online စာမကျြနှာမြား ပျေါသို့ ဓာတျပုံမြား၊ ရုပျသံဖိုငျ မြားအဖွဈ ရောကျလာသညျ့ ဖွဈ စဉျမြားရှိလာသညျ။ထိုဖွဈစဉျမြား၏နောကျတှငျ ပတျဝနျးကငျြ အသိုငျးအဝိုငျး၏ အထငျသေးရှုတျခမြှုကို ရငျဆိုငျရပွီး ….သကျဆိုငျသူမိနျးကလေး ငယျအခြို့ … Read more
မနက်က ရွှေတိဂုံဘုရားအနီး ကြက်သီးထဖွယ်မြင်ကွင်းတစ်ခု…
မနက်က ​ရွှေတိဂုံဘုရားအနီးမှာ တက္ကစီတစ်စီး ပျက်သွား​တော့ လမ်း​တွေပိတ်တာ​ပေါ့….. ကုန်းတက်ကြီးဆို​တော့ ဘယ်အဆင်​ပြေပါ့မလဲ…..အနီးမှာရှိတဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲက​ ပြေးလာပြီး ကူတွန်းတယ်….ထင်သ​လောက် မတွန်းနိုင်ဘူး။ အဲဒီမှာ လက်တစ်ဖက်မရှိတဲ့ သတင်းစာ​​ရောင်းသည်က​ ပြေးလာပြီး ကူတွန်းတယ်….. တစ်ဆက်တည်း ပန်းသည်ရယ်၊ကွမ်းယာသည်ရယ်ကပါ ဝိုင်းတွန်း​တော့​ နောက်ဆုံး ပျက်​နေတဲ့တက္ကစီ ကုန်း​ပေါ်​ရောက်သွား​တော့တယ်။ လမ်းပိတ်​နေတာကလည်းရှင်းသွားတယ်…ကိုယ်လည်းဖုန်းအမြန်ထုတ်ပြီးမှတ်တမ်းတင်လိုက်တယ်….. ကားကို ဝိုင်းတွန်းတဲ့တစ်ဦးတစ်​ယောက်ချင်းစီကို​ လေးစားတယ်…..တကယ်​တော့သူတို့နဲ့မဆိုင်သလို​ နေလို့ရတာ​ပေါ့…… ဒါ​ပေမဲ့ ကိုယ်စီအသိစိတ်နဲ့​ပြေးလာပြီး တစ်​ယောက်တစ်ဖက် တစ်​ယောက်တစ်လက်နဲ့ဝိုင်းကူညီ​တော့​ နောက်ဆုံး ကားပိတ်တာကြီးကို​ ဖြေရှင်းသွားနိုင်တယ်…. အခု မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်​နေတဲ့ပြသနာ​တွေဟာ ကျွန်​တော်တို့ အတူတူ မရှိဘူးကြ​သေးလို့ပါ…..။ကျွန်​တော်တို့ အတူတူ မတွန်းရ​သေးလို့ပါ….။ ကျွန်​တော်တို့ အတူတူလက်ဆွဲမနှုတ်ဆက် ရ​သေးလို့ပါ….။လာပါ….လက်သီးဆုပ်​တွေဖြည်ပြီး လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီး ကျွန်​တော်တို့ အတူတူ ကုန်း​ပေါ်တက်မယ်​လေ….။ ကျွန်​​တော်တို့ လက်​​​တွေစုပြီး ကဗျာတစ်ပုဒ်​ ချရေးမယ်…..။ကြိုက်တဲ့​ခေါင်းစဉ်တပ် ငြိမ်းချမ်း​ရေးအ​ကြောင်း​တွေ ပါ​ပါ​စေ … Read more
လူချင်းတူနေပေမဲ့ မိန်းကလေးအများစု နှစ်သက်လေ့ရှိတဲ့ ယောင်္ကျားလေး အမျိုးအစား (၅)မျိုး
လူများဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့သော အမျိုးသားတွေက မိန်းကလေးများကို အလွယ်တကူဆွဲဆောင်နိုင်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ ယောင်္ကျားလေးတွေကျတော့ လည်း မိန်းကလေးများကို ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိကြပါဘူး။ဒါဟာ လူချင်းတူနေပေမဲ့ မိန်းကလေးအများစု နှစ်သက်တဲ့ ပုံစံတွေမရှိလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခုအောက်မှာတော့ မိန်းကလေးများကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ယောင်္ကျားလေးများနဲ့ မိန်းကလေးများကို မဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ယောင်္ကျားလေးများအကြား ဘာကွာခြားနေလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလို ကိုယ်ပိုင်ပုံစံတွေကို ကူးချလို့မရပါဘူး။ဒီကိုယ်ပိုင်ပုံစံတွေဟာ ကိုယ်ပိုင်ပုံစံသာဖြစ်ပြီး မိန်းကလေးတွေကလည်း ပုံစံတုနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့ သူတွေကို အလွယ်တကူ အကဲခတ်နိုင်ကြပါတယ်။ ၁။ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်လွန်းတက်သော ယောင်္ကျားလေးများ စိတ်ကူးယဉ် ဆန်တဲ့ ယောင်္ကျားလေးဆိုတာ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ပန်းတွေသွားပေးတတ်သူ၊မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးတွေ ပို့ပေးတတ်သူဖြစ်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် ပိုးပန်းတတ်တဲ့သူကို တည်တည်တံ့တံ့နေကြတဲ့ ယောင်္ကျားလေးတွေထက် မိန်းကလေးများက ပိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။ ၂။ ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ … Read more
ဆင်းရဲသားလေးတစ်ယောက်အကြောင်း ဟိုး တစ်ချိန်က အရမ်းကို ဆင်းရဲတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်… သူ့ကို အရမ်းချမ်းသာတဲ့လူတစ်ယောက်ကတွေ့တော့ သနားပြီး သူ့ကို ကြီးပွားလာအောင် ကူညီချင်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်… သူဌေးက သူ့ကို နွားတစ်ကောင်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်… သူ့ကို လယ်ယာထွန်ယက်ဖို့ သေချာမှာခဲ့တယ်…အခုချိန်မျိုးစေ့ ကြဲထားပြီး ကောင်းကောင်းထွန်ယက်ရင် ဒီနှစ်ကုန်ရင် ဆင်းရဲတယ် ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ ဝေးဝေးခွာနိုင်တော့မှာပါလို့ ပြောခဲ့တယ်… ဒီသူဆင်းရဲလေးကတော့ အစပိုင်းမှာ မျှော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့ တက်တက်ကြွကြွလုပ်ရှာတယ်…ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက်မှ မကြာလိုက်ဘူး… နွားက မြက်စားတယ်… လူက ထမင်းစားတယ်…ဖြတ်သန်းရတဲ့ဘဝက အရင်ကထက်တောင်ခက်ခဲနေသေးတယ်… သူဆင်းရဲလေးက ပြန်စဉ်းစားတယ်…နွားကို ရောင်းလိုက်ပြီး ဆိတ်တချို့ဝယ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်…တစ်ကောင်ကို အရင်သတ်စားလိုက်ပြီး ကျန်တာတွေကို ဆက်မွေးထားလိုက်မယ်… ဆိတ်ကလေးတွေမွေးလာလို့ ကြီးလာရင် ပြန်ရောင်းစားလို့ရတယ်… ဒါလဲ တော်တော်လေး အမြတ်ရနိုင်တယ်… သူဆင်းရဲလေးရဲ့ အစီအစဉ်ကလဲ အထမြောက်လိုက်ပါတယ်… ဆိတ်တစ်ကောင်ဘဲ သတ်စားလိုက်တယ်…နောက်ပိုင်းမှာ ဆိတ်ကလဲ တော်တော်နဲ့ … Read more
တရုတ် (၁၂) ကောင်ဗေဒင် အရမ်းမှန်တယ်နော်…1 တရုတ် (၁၂) ကောင်ဗေဒင် … အရမ်းမှန်တယ်နော်…2 တရုတ် (၁၂) ကောင်ဗေဒင် … အရမ်းမှန်တယ်နော်…3 တရုတ် (၁၂) ကောင်ဗေဒင် … အရမ်းမှန်တယ်နော်…4 တရုတ် (၁၂) ကောင်ဗေဒင် … အရမ်းမှန်တယ်နော်…5 တရုတ် (၁၂) ကောင်ဗေဒင် … အရမ်းမှန်တယ်နော်…6 တရုတ် (၁၂) ကောင်ဗေဒင် … အရမ်းမှန်တယ်နော်…7 တရုတ် (၁၂) ကောင်ဗေဒင် … အရမ်းမှန်တယ်နော်…8 တရုတ် (၁၂) ကောင်ဗေဒင် … အရမ်းမှန်တယ်နော်…9 တရုတ် (၁၂) ကောင်ဗေဒင် … အရမ်းမှန်တယ်နော်…10 တရုတ် (၁၂) ကောင်ဗေဒင် … အရမ်းမှန်တယ်နော်…11 တရုတ် … Read more
ဒီဟာတွေလုပ်မိရင် တစ္လကေန ၃လအထိ ငွေမဝင်ဘဲ လာဘ်ပိတ်စေတတ်ပါတယ်
ဒီဟာတွေလုပ်မိရင် တစ္လကေန ၃လအထိ ငွေမဝင်ဘဲ လာဘ်ပိတ်စေတတ်ပါတယ် (၁)အိပ်ယာနောက်ကျမှထခြင်း မပြုလုပ်ပါနဲ့။ (၂)မနက်ပိုင်းကို ရန်ဖြစ်တာ စကားများတာတွေမလုပ်ပါနဲ့။ (၃)အိပ်ယာထထချင်း မျက်နှာအရင်တန်းသစ်ပါ အစားအရင်စားတာ အိမ်သာတန်းတက်တာ မလုပ်ပါနဲ့ (၄)ဘုရားအရင်ရှိခိုးပြီးမှ အလုပ်ကိုစလုပ်ပါ (၅)ပိုက်ဆံတွေကို ပြန့်နေအောင်ထားတာမျိုး လိပ်ထားတာတို့ ပစ်စလခက်မထားပါနဲ့။ (၆)စိတ်ထားကောင်းကောင်းထားပါ သူများကို အတင်းပြောတာ ပုတ်ခပ်တာမျိုးမလုပ်မိပါစေနဲ့။ (၇)အနောက်အရပ် မြောက်အရပ်တွေကို ခေါင်းပေးပြီးမအိပ်မိပါစေနဲ့ (၈)ဖိနပ်အဟောင်းတွေ ထီးအပျက်တွေ နာရီအပျက်တွေ အိမ်မှာမထားပါနဲ့ (၉)ပိုက်ဆံပေါ်မှာ ဘောပင်နဲ့ ဟိုခြစ်ဒီခြစ် မရေးပါနဲ့ (၁၀)ခင်ပွန်းကြီး (၁၀)ပါးကိုလုံးဝ မပစ်မှားမိပါစေနဲ့ မစော်ကားမိပါစေ (၁၁)တစ်ပတ်ကိုတစ်ရက်တော့ အသားငါးမစားပါနဲ့ သက်သက်လွတ်စားပါ။ (၁၂)အိပ်ယာထထချင်း ဖုန်းသုံးတာ ဖုန်းပြောတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ မျက်နှာအရင်သစ်ပါ။ (၁၃)မနက်ပိုင်း ဘယ်သူကိုမှငွေမချေးပါနဲ့ (၁၄)မနက်ပိုင်း အရက်သောက်တာ မလုပ်ရပါ (၁၅)ငွေတွေကို ဖိနပ်နဲ့ထိတာ ထမိန်နဲ့ထိတာမျိုးမလုပ်မိပါစေနဲ့ … Read more